Macluumaad loogu talagalay kaqeybgalayaasha daraasadda - Linköpings universitet
Macluumaad loogu talagalay kaqeybgalayaasha da'doodu tahay 12-18
Kahor intaadan is qorin
Sidee u dhici doontaa?
Weydiimo & Jawaabo
Safarka dheer waa daraasad lagu baarayo sida caruurta iyo dhalinyarada tahriibka ah haysato iyo waxay u baahan yihiin inay ku dareemaan wanaag wadanka Iswiidhan. Waxaan wareysaneynaa caruurta iyo dhalinyarada oo jira 12-18 sano oo dhowaan yimid Sweden. Annaga oo la shaqeynadaraasadda ayaa ah cilmi baare Barnafrid oo ka tirsan jaamacada Linköping.
Saxeex daraasadda!Visa/dölj innehåll
Halkaan, adigoo ah arday u dhexeeya 12 iyo 18 sano jir, waad iska qori kartaa daraasadda. Raac tilmaamaha, xulo bilaha aad rabto inaad kula soo xiriirto oo buuxi faahfaahintaada. Waan kula soo xiriiri doonaa.
Kahor intaadan is qorinVisa/dölj innehåll
Foto MaskotAdiga oo ah 12-18 sano jir oo yimid Sweden lixdii bilood ee ugu dambeysay waad is diiwaan galin kartaa si laguu wareysto. Wareysiga kahor, waxbadan ayaan kuu sheegi doonaa waxa loola jeedo ka mid ahaanshaha daraasadeena. Waxaad sidoo kale heli doontaa warqad ku qoran warbixintaan . Waxaan rabi laheyn inaad hada aqriso warqadaan warbixinta ah!
Halkaan waxaa ka heli kartaa bogga warqadda warbixinta
Maxaan u dooneynaa inaan sameyno daraasaddan?
Waxaa jira aqoon aad u yar oo ku saabsan sida ay dareemayaan carruurta iyo dhallinyarada baxsadka ah. Ugu horeyn wax yar ayaan ka ognahay waxa ay ugu baahan yihiin inay ku dareemaan wanaag Iswiidhan. Waxaan rajeyneynaa inaan helno aqoon dheeri ah oo ka caawin karta mustaqbalka caruurta iyo dhalinyarada tahriibiya.
Mudan in laga fiirsado
Carruurta iyo dhallinyarada aan wareysanno ma heli doonaan wax faa'iido shaqsiyadeed ah. ujeedku waa gacan ka helid kordhinta aqoonta carruurta ee tahriibka ah. Anaga waraysanayna dhamaanteen waan u baranay inaan la kulanno carruurta iyo dhalinyarada ku jira xaalad nololeed oo kala duwan. Sidaa darteed, waxaan diyaar u nahay inaan kula kulanno meesha aad joogtid . Haddii inta lagu guda jiro wareysiga ay soo baxdo inaad u baahan tahay taageero dheeraad ah waxaan kuu tilmaameena goobaha aad la xiriiri laheyd.
Sidee u dhici doontaa?Visa/dölj innehåll
1. Waad isdiiwaan galinaysaa
Markaad isdiiwaan galiso, waxaan durbaba u hubineynaa inaad ka mid tahay kooxda bartilmaameedka daraasadda.
2. Waan kula soo xiriiri doonnaa oo waan ku ballansan doonnaa waqtiga lagu wareysan doono.
Waan ku soo waceynaa anaga iyo turjubbanka. Intaa ka hor way fiicnaan laheyd inaad ka sii fikirtay goobta aad rabto in laguugu wareysto. Waxaan ku wareysaneynaa
meesha aad irtaax ku tahay iyo waqtiga kuu haboon.
3. Dib u eegida macluumaadka iyo ogolaanshaha
Haddii aad ka yar tahay 15sano , waxaad helaysaan adiga iyo waalidkaaga ama ilaaliyahaaga warbixin ku saabsan daraasadda. Hadaad 15 sano gaartey, adiga kaliya ayaa macluumaad helaya. Haddii aad rabto inaad ku biirto daraasadda, waxaad buuxineysaa adiga kaligaa ama adiga iyo waalidkaa, wax la yiraahdo ogolaansho. Tan macnaheedu waa adiga, ama idinka ayaa ogolaaday inaad ku biirto daraasadda.
Wareysiga waxaa lagula yeelanayaa turjubaan ku hadla luqadda aad ku kalsoon tahay waxeyna qaadaneysaa qiyaastii saacad waxey ku xiran tahay intaad sheegto. Intuu waraysigu socdo waxaad lagu weydiin doonaa su'aalo ku saabsan noloshaada, khibradahaaga iyo sida aad hadda dareemeyso. Hadaad dareento in wax ay gaar kuu yihiin oo aan laga jawaabi karin, waad sheegaysaa.
Haddii aad oggolaato, waxaan kula soo xiriiri doonnaa hal sano ka dib si aan u aragno sida aad tahay.
6. Waxaan sameynaa cilmi baaris
Waxaan markaa aruurineynaa jawaabahaaga iyo kuwa kaleba si aan aqoon dheeraad uga barano waxyaalo kala duwan, Tusaale ahaan, waxa keenaya carruurta tahriibaya inay ku fiicnaanayaan. Kadib waxaan qoreynaa wax la yiraahdo maqaalo saynis ah waxaanan soo bandhigeynaa cilma baaristaan inta aan gaarsiin karno.
Weydiimo & JawaaboVisa/dölj innehåll
Waa maxay su'aalaha aan weydiinno?
Waxaan weydiinaa su'aalo ku saabsan waxyaabo badan oo kala duwan. Waxyaabaha kale, khibrado rabshad ama dagaal, caafimaadka, nolol maalmeedkaaga iyo sida ay u shaqeyso. Laakiin sidoo kale asalka noloshaada. hadaad dhigato iskuul, da'daada, iwm.
Qof kale ma ogaan karaa inaan ka jawaabay?
Maya, qof kale aan ka aheyn cilmi baarayaasha daraasaddan mooyee in aad adigu tahay adiga. Macluumaadkaaga waxaa ilaaliya sharciga oo na looma ogola inaan cid kale la wadaagno.
Miyaan ka qoomameyn karaa haddii aanan rabin inaan ka sii mid ahaado daraasadda?
Haa, waad ka qoomamayn kartaa wakhti kasta. Xitaa ka dib marku wareysigu dhammaado, waad na la soo xiriiri kartaa anaga oo waan tirtiri doonaa macluumaadkaaga.
Ma jiraan wax halis ah oo ka qeybgalka?
Ma ogin wax halis ah oo ku lug leh. Su`aalo qaarkood waxay noqon karaan kuwo xasaasi ah carruurta iyo dhallinyarada qaarkood. Qaar kale waxay noo sheegeen inay u arkayeen inay muhiim tahay inay ka jawaabaan su'aalaha. Haddii ay dhacdo in su'aal ka mid ah aad dhibsato waxaad dhihi kartaa ma rabo inaan ka jawaabo. Markaa waan ka boodeynaa
Maxaan ku qabannaa jawaabahaaga?
Kuwa ka qeybqaata daraasada waa qarsoodi oo marka wareysiga laaga qaado, waxaa laga tirtiriyaa magacyada si aan qofna u aqoonsan karin iyaga, marka laga reebo cilmi-baarayaasha ku jira mashruuca (eeg hoos).
Kaliya cilmi baarayaasha ayaa marin u leh alaabta laguu keydiyo meel qufulan ama fayl sir ah Furayaasha waraqqaha la keydiyey iyo koodka furaha waxaaa la baabi'iyaa toban sano ka dib. Kaqeybgalaha daraasaddaan waxuu xaq u leeyahay inuu ogaado sanadkiiba hal mar isagoo lacag bixin wixii macluumaad ah ka diiwaan gashan mashruucaan. Waxuu sidoo kale xaq u leeyahay in laga beddelo waxii macluumaad ah oo qaldan in laga bedalo.
Macluumaadkaaga, micnaha wax kasta oo aad noo sheegtay, waxaa lagu ilaaliyaa qaab sir ah
server. Jawaabahaaga waxaa la siin doonaa lambar iyo furaha lambarkaas waxaa lagu keydin doonaa meel ka duwan jawaabaha lagu keydiyo.
Ma jiraan wax magdhow ah la bixinayo ka qayb qaadashada daraasaddaan.
Ma la heli karaa cilmi baarista ka soo baxda daraasadda?
Haa gabi ahaanba. Dhamaan cilmi baarista waxaa lagu daabici doonaa bogga halkaan. Annaguna waxaan soo gudbin doonaa koobitaanno cilmi-baaris oo fududloogu tala galey carruurta iyo dhallinyarada luqado badan lagu tarjumay
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato natiijooyinkayaga, iwm, sidoo kale marwalba ku soo dhawoow inaad nala soo xiriirtid.
Yaa masuul ka ah mashruucaan?
Maamulaha mashruucan waa jaamacada Linköping. Laura Korhonen ayaa mas'uul ka ah cilmi baarista iyo macluumaadka xiriirka ee noo ah:
Jaamacadda Linköping	581 85 Linköping
Leg.Psykolog & doktorand